ဦးအောင်သောင်း(ခ) ဦးအောင်တောင်း(ခ) ကုန်အောင်တောင်း (ကိုအောင်သောင်း) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The death of the monk who entered the mosque to burn and trapped accidentally was used to justify the killing of 400 Muslims in Meikhtila
ဒီပဲယင်း တရားခံ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ စံအိမ်တော်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း…. »
ဦးအောင်သောင်း(ခ) ဦးအောင်တောင်း(ခ) ကုန်အောင်တောင်း (ကိုအောင်သောင်း)
အပိုင်း(၅)မှာ လူလည်ကြီးများရဲ့ ဘုရင်အကြောင်း ရေးသားမယ်လို့ ကြိုတင်ကြေညာထားလို့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ လည်ပင်းရှည်စွာ စောင့်မျှော်နေရတာကိုလည်း တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ သိထားတဲ့အတိုင်း သုံးမည်ရခြကြီး ဘွဲ့ရထားပြီး အမည်သုံးမျိုးနဲ့ ကျော်ကြားသူ ဦးအောင်သောင်း(ခ) ဦးအောင်တောင်း(ခ) ကုန်အောင်တောင်း (ကိုအောင်သောင်း)ဟာ မီဒီယာလောကမှာ ထင်ပေါ်သူတစ်ဦးဖြစ်လို့ မီဒီယာမှာ မရှိသေးတဲ့ အချက်အလက်များ သိစေချင်တာကြောင့် အချိန်ယူခဲ့ရတာပါ။
လူလည်များရဲ့ဘုရင် ဦးအောင်သောင်းဟာ လူမသိ သူမသိ ကျောင်းဆရာဘ၀ကနေ န၀တ၊ နယက လက်ထက် သြဇာအာဏာ ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကို ကျော်ခွလှည့်ပတ်ပြီး အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲကာ ယနေ့အထိ ပန်းပန်လျက်ပါလို့ ဆိုနိုင်သူ တစ်ယောက်ပါ။ ယခင်အပိုင်းများမှာ ရေးခဲ့တဲ့ လူလည်ကြီးများထက် အဆပေါင်းများစွာ သာတဲ့သူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ န၀တ၊ နယကလက်ထက်မှာ အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲမွှေနှောက်ကာ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အခွင့်ကောင်းယူ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေကို ခိုးယူပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုစာရင်း ၀င်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘ၀ အစကတော့ မျက်စိသူငယ်၊ နားသူငယ်နဲ့ ၀ဲလောင်ရွာမှာ မွေးတဲ့ ၀ဲလောင် ရွာသားလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ အလွန်ပဲ ဆင်းရဲချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မှော်ဘီ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း အပတ်စဉ်(၃၁)မှာ ဗိုလ်သင်တန်းတတ်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်ထဲမှာ အမှတ်(ရ) တပ်ရင်းမှူး၊ နမခ စစ်တိုင်းမုံရွာမှာ စစ်ဗျူဟာမှူးနဲ့ န၀တ လက်ထက်မှာ မကွေးတိုင်း တ၀တ ဥက္ကဌ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက နမခ တိုင်းမှုး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ဟာ သူ့ဆရာ အရင်းဖြစ်ပါတယ်။
စက်ရုံဖွင့်ပွဲနေ့က မှင်နဲ့မောင်းနဲ့ ကျောက်ဆည် စွပ်ကျယ်စက်ရုံထုတ် အဆင့်အတန်းမှီ စွပ်ကျယ်တွေကို ဘယ်လို သက်သာအောင် ထုတ်လုပ်ပြီး ၀င်းသူဇာ အရောင်းဆိုင်များကနေ အမြတ်ငွေတွေ ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြနေချိန်မှာ ဦးသန်းရွှေက အိပ်ငိုက်နေပါတယ်။ ကျောင်းဆရာပီပီ အာဘောင် အာရင်းသန်သန်နဲ့ တရုတ်နယ်စပ်က၀ယ်လာတဲ့ စွပ်ကျယ်တွေကို စက်ရုံထုတ်အဖြစ် အရောင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့သူ အဘ၀န်ကြီးကို စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေက ကြိတ်ပြီးရယ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ စက်ရုံမလည်ပဲ ကျောက်ဆည်က ဦးသန်းရွှေအမျိုးတွေကို ၀န်ထမ်းခန့်အပ်ထားတဲ့ ကျောက်ဆည်စွပ်ကျယ်စက်ရုံကြီးကလည်း ဦးအောင်သောင်း အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ဦးအောင်သောင်းဟာ ရှေ့ကဆရာသမားများကိုနမူနာယူပြီး သူ့ရဲ့မတရား အဂတိလိုက်စားတဲ့ အကြောင်းတွေကို သိနေတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တပ်မှူးတွေကို မျက်နှာလုပ်ကာ ပါမစ်များချပေးရင်း စည်းရုံးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်က တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို အန္တရာယ် ပေးလာမယ်လို့ တွက်ထား ခဲ့တာကြောင့် ဦးမောင်အေးရဲ့ အကာအကွယ်အပြင် ဦးသန်းရွှေရဲ့အကာအကွယ်ရဖို့ နည်းလမ်းရခဲ့ပါတယ်။ သူတွေ့ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းအသစ်ကတော့ သူ့ရဲ့တပည့် စစ်ကိုင်းချည်မျှင် အထည်စက်ရုံမှူးကို အ်ိမ်တော်ကြီး (ဦးသန်ရွှေအိမ်) မီးဖိုချောင်ကိစ္စကို လုပ်ပေးဖို့စေခိုင်းခဲ့ပြီး အိမ်တော်ကြီးမိသားစုက သူပြောသမျှ ယုံကြည် လက်ခံလာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောက်လမ်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်လမ်းနည်းဆိုပေမဲ့ လူလည်ကြီးရဲ့ အကြံအစည်တွေ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
ဒါကိုသိတဲ့ သမ္မတကြီးက အစိုးရအဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းချိန်မှာ ဦးအောင်သောင်းကို နေရာမပေးတော့ပဲ စက်မှု(၁)၀န်ကြီး အဖြစ်ကနေ အနားပေးခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာတော့ ဦးအောင်သောင်း ဆိုးမွေကြောင့် စက်ရုံတစ်ဝက်ကျော် မလည်ပတ်ခြင်း၊ အရှုံးလွန်စွာ ကြီးမားနေခြင်းတို့ကြောင့် စက်မှု(၁)၀န်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားတာ အားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှု(၁)ကရှုံးပေမဲ့ စက်မှု(၁)နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ လူလည်ကြီးသားများ ကုမ္ပဏီတွေက အချိန်တို ကာလအတွင်းမှာ ထိပ်တန်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သိသလောက်ဖော်ပြရရင်—
– ရန်ကုန် သမ္မတ၊ စထရင်း၊ အင်းလျားလိပ် ဟိုတယ်ကြီး(၃)ခု IGE က လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ
ဦးအောင်သောင်းရဲ့ သားပိုင်ကုမ္ပဏီ(၃)ခုအပါအ၀င် စက်မှု(၁)နှင့် ပတ်သက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီများ၊ စက်မှု(၁) ဖျက်သိမ်းလိုက် ရသည့် အကြောင်းရင်းများ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းလာခဲ့ရင် အာဘောင် အာရင်းသန်သန် ဘယ်လို လိမ်ညာထွက်ဆိုမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ အနေဖြင့် အဂတိတရား ကင်းကင်းနဲ့ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ရင် –
– BANK OF AUSTRALIA တွင် ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် အမည်ဖြင့် အပ်နှံထားသော နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှု
– BANK OF ENGLAND တွင် ဒေါ်ခင်ဖြူလှ အမည်ဖြင့် အပ်နှံထားသော နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှု
– စက်မှု(၁) စက်ရုံများသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အောင်ရည်ဖြိုးကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းတမ်း
SHARED FROM THE FB OF Wai Yan De Mo
ရွေးကောက်ပွဲ အမှီ ကြံဖွတ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်သောင်း(ခ) ဦးအောင်တောင်းရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို အတိအကျထပ်မံ ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့..ူhttp://www.demowaiyan.org/2012/03/blog-post_9385.html
ဆောင်းပါးရှင် ကိုရွှေဓူဝံကတော့ လူလည်ကြီးများဘုရင် ဦးအောင်သောင်း(ခ) ဦးအောင်တောင်းရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို အရှိုက်ကို ဒူးနဲ့တိုက်ပြီး ဖွင့်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ..။ အပိုင်း(၆) လူလည်ကြီးများ ဘယ်သူအလှည့် ဆိုတာတော့ ဆက်လက် စောင့်မျှော် ဖတ်ရှူကြပါရန်…။ ဒီမိုဝေယံနဲ့ GRWအဖွဲ့တို့ ပူပေါင်းရေးသား တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်တောင်းရဲ့ ရန်ကုန် လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာမှ နန်းတော်တမျှ ခမ်းနားတဲ့အိမ်တော်ကြီး အကြောင်းပြန်ဖတ်ချင်ရင်.. http://www.demowaiyan.org/2010/07/generals-and-their-relatives-watchers.html
Tags: Buddhism, Burma, Meiktila, Muslim, Yangon
This entry was posted on April 23, 2013 at 10:22 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.